यस्तो छ ट्रम्पसँग किमले गर्ने वार्ताको कार्यसूची ! || सुनौलो नेपाल
यस्तो छ ट्रम्पसँग किमले गर्ने वार्ताको कार्यसूची !
उत्तर कोरिया र अमेरिकाका शीर्ष नेताबीच हुने ऐतिहासिक भेटवार्ताको सबै तयारी पूरा भएको छ। दुई देशका नेता अर्थात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका नेता किम जोंग उन भेटवार्ताका लागि निर्धारित स्थान सिंगापुर पुगिसकेका छन् ।
सम्पादकीयमा लेखिएको छ–भलै कुनै देशका साथ हाम्रो सम्बन्ध पहिला निकै खराब रहेको होस्। तर हाम्रो भनाइ छ कि यदि त्यो देश हाम्रंो स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दछ भने हामी पनि उनीहरुसँग सम्वादको माध्यमबाट सामान्य सम्बन्ध कायम गर्नेमा विश्वास गर्दछौ।
आइतबार सिंगापुर पुगेपछि दुवै नेता अलग अलग होटलमा बसेका छन् । एकातिर जहाँ किम सिंगापुरको फाइभ स्टार होटल सेन्ट रेजिसमा बसेका छन् भने ट्रम्प त्यसको थोरै दूरीमा रहेको साँग्रिला होतलमा बसेका छन् । दुवै नेताको भेटवार्ता भने सेनटोसा द्वीपमा रहेको आलिशान कपेले होटलमा हुने तय गरिएको छ। बीबीसीबाट